महिला आयोग : नाम संवैधानिक, काम शून्य
काठमाडौँ, २५ असोज । महिलाको हकहित र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दैआएको राष्ट्रिय महिला आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
नेपालको संविधान ९२०७२० जारी भएसँगै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएको यो आयोग एक वर्षअघिदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
कानूनअनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । गत असोज २८ गतेसम्म भगवती घिमिरे आयोगको कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा बहाल थिइन् र उनी एक्लो पदाधिकारी थिइन् । उनको कार्यकाल सकिएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ ।
राणाका अनुसार मुलुकमा बढिरहेको महिला हिंसाका घटनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । महिलासम्बन्धी गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि परिपालनाको अनुगमन पनि भएको छैन । राणाले थपिन् – “संविधानले संवैधानिक आयोग बनाएको छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो ।”
महिला अधिकारकर्मी डा. रेणू अधिकारी भन्छिन् – “महिला हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय महिला आयोगमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुनु भनेको महिलाको मुद्दाप्रति राज्यबाट उपेक्षा हुनु हो ।”
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिलालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ९२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा वि.सं. २०५८ फागुन २३ गते डा. दुर्गा पोखरेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरेको थियो ।
योग्यताको हकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुनेले कम्तीमा १० वर्ष महिलाको हकहित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको हुनुपर्नेछ ।